स्वास्थ्य खबर – Page3– rastriyakhabar.com
पीसीआर परीक्षणको नक्कली रिपोर्ट बनाउने तीन पक्राउ
बिहिबार, कार्तिक २७, २०७७ मा प्रकाशित
बाँके। चिकित्सकको हस्ताक्षर चोरेर कोरोना जाँचको नक्कली पीसीआर रिर्पोट बनाएको आरोपमा बाँके प्रहरीले भेरी अस्पतालका दुई सुरक्षा गार्ड र एक सहयोगीलाई पक्राउ गरेको छ । प्रहरीले अस्पतालबाट उनीहरुलाई पक्राउ गरेको हो । अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष प्रमोद धितालका अनुसार सुरक्षागार्ड कम्पनीमार्फत..
४०४ कोरोना संक्रमित आइसियुमा, ९६ को भेन्टिलेटरमा उपचार हुँदै
बुधबार, कार्तिक २६, २०७७ मा प्रकाशित
काठमाडाैं। हाल देशभर रहेका कोरोनाभाइरसका सक्रिय सङ्क्रमितमध्ये ४०४ जना सघन उपचार कक्ष (आइसियु) र ९६ जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । जसमध्ये आइसियुमा प्रदेश नंं १ का ४५ जना, प्रदेश नंं २ का १२ जना, वागमती प्रदेशका १८४ जना, गण्डकी प्रदेशका ७६ जना, लुम्बिनी प्रदेशका ६२..
२४ घन्टामा काठमाडौं उपत्यकामा १,४२८ जनामा कोरोना संक्रमण
मङ्लबार, कार्तिक २५, २०७७ मा प्रकाशित
काठमाडौं । कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या काठमाडौं उपत्यकामा देशभरका संक्रमितमध्ये आधाभन्दा धेरै संख्या देखिएको छ । पछिल्लो २४ घन्टामा काठमाडौं उपत्यकामा १ हजार ४ सय २८ जनामा कोरोना संक्रमण भएको छ । काठमाडौंमा १ हजार १ सय ३६ जना, भक्तपुरमा ९१ जना र ललितपुरमा २ सय १ जनासहित पछिल्लो २४ घन्टामा..
काठमाडौँ उपत्यकामा थपिए १५१२ कोरोना संक्रमित
आइतवार, कार्तिक २३, २०७७ मा प्रकाशित
काठमाडौँ। पछिल्लो २४ घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा थप १ हजार ५१२ जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँमा १ हजार २ सय ९४, भक्तपुरमा ७७ र ललितपुरमा १ सय ४१ जनामा कोरोना पुष्टि भएको हो। पछिल्लो २४ घण्टामा देशभर २ हजार ७ सय ५३ जना संक्रमित थपिएका छन्। पछिल्लो..
कसरी गराउने ‘नर्मल डेलिभरी’ ? यस्तो छ विधी
शनिबार, कार्तिक २२, २०७७ मा प्रकाशित
बच्चालाई प्राकृतिक रुपमै जन्म दिनु सर्बोत्तम हो । यद्यपी कतिपय परिस्थितिमा सामन्य हिसाबले बच्चा जन्माउन सकिँदैन र शल्याक्रियाको साहारा लिनुपर्ने हुन्छ । किन गर्ने नर्मल डेलिभरी ? नर्मल डेलीभरीको सबैभन्दा पहिलो फाइदा भनेको आमाको स्वास्थ्य हो । शल्याक्रिया गराएको तुलनामा सामन्य रुपमा बच्चा..
एनआरएनद्वारा १० हजार थान एन्टिजेन परीक्षण किट हस्तान्तरण
काठमाडौँ। कोरोना भाइरस परीक्षणका लागि प्रयोग गरिने १० हजार थान एन्टिजेन परीक्षण किट गैरआवासीय नेपाली संघले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गरेको छ । स्वाथ्य मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री नवराज रावतलाई गैर आवासीय नेपाली संघका उपाध्यक्ष डा...
कोरोना उपचार नि:शुल्क गर्ने फैसला पुनरावलोकन गर्न सर्वोच्चले दिएन अनुमति
कोरोना परीक्षण तथा उपचार नि:शुल्क गर्न आफूले दिएको परमादेशमा पुनरावलोकन नहुने सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ।कोरोनाको परीक्षण र उपचार नि:शुल्क गर्न भन्दै सर्वोच्चले दिएको परमादेश सच्याउन स्वास्थ्य मन्त्रालयले पुनरावलोकन निवेदन दिएको थियो। बिहीबार न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, सपना मल्ल प्रधान र..
वीर अस्पतालको इमर्जेन्सीमा कार्यरत डाक्टरले दिए सामूहिक राजीनामा
बिहिबार, कार्तिक २०, २०७७ मा प्रकाशित
काठमाडौं । वीर अस्पतालको इमेर्जेन्सी विभागमा कार्यरत १६ जना चिकित्सकले सामूहिक राजीनामा दिएका छन् । अस्पताल प्रशासनले आफ्ना माग र सुरक्षामा ध्यान नदिएको भन्दै १६ जना चिकित्सकले सामूहिक राजीनामा दिएका हुन् । कोरोना महामारीको समयमा आफूहरुले पाउनुपर्ने भत्तासमेत नपाएपछि उनीहरुले सामूहिक..
उपत्यकामा पछिल्लो २४ घण्टामा थप १८७८ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि
काठमाडौं। काठमाडौं उपत्यकामा पछिल्लो २४ घण्टामा थप १८७८ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौंमा १५७०, भक्तपुरमा ११९ र ललितपुरमा १८९ गरी जम्मा १८७८ जना संक्रमित थपिएका छन् । यसअघि शुक्रबार (हिजो) काठमाडौंमा १२४२, भक्तपुरमा ६३ र ललितपुरमा १६३ जना..
सेक्स गर्दा गर्न नहुँने आठ कुरा जानी राखौं
मङ्लबार, कार्तिक १८, २०७७ मा प्रकाशित
सेक्स प्राकृतिक पक्ष हो र यो अपरिहार्य छ । एक अर्कामा समन्वय, समझदारी र सौहार्दपूर्ण वातावरणमा गरिएको सेक्सले मानिसको जीवनमा सकारात्मक असर पुर्याउँदछ । पार्टनरको भावना बुझेर र तरिका मिलाएर गरिएको सेक्सले बढि आनन्द दिने गर्दछ तर, सही समय नआई चालिएको कदमले पुरै ‘सेक्स मुड’ नै बिगार्न सक्दछ । ‘सेक्स..
दूध र दहीमा कुन खानु राम्रो ? यस्तो बेलामा खाँदै नखानुस्
नेपालमा दूध र दही दैनिक जीवनमा धेरैले सेवन गर्छन् । दुवैको सेवन स्वास्थ्यका लागि फाइदाजनक मानिन्छ । तर, दूधभन्दा दही खानु स्वास्थ्यका लागि लाभदायक मानिन्छ कमैलाई थाहा छ । दूधलाई जमाएर अमिलो बनाएर दही बनाइन्छ । यसमा भएका ब्याक्टेरियाका कारण पाचन प्रक्रियालाई सहज बनाउँछ । दहीमा दूधभन्दा बढी प्रोटीन,..
कोरोना संक्रमणबाट पछिल्लो २४ घन्टामा २४ जनाको मृत्यु
काठमाडौं । कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट पछिल्लो २४ घन्टामा २४ जनाको मृत्यु भएको छ । देशभर कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या ९ सय ८४ पुगेको छ । देशैभर पछिल्लो २४ घन्टामा २ हजार ९ सय ३३ जनामा कोरोना संक्रमण भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो २४ घन्टामा..
कोरोना संक्रमणबाट पछिल्लो २४ घन्टामा २३ जनाको मृत्यु
सोमवार, कार्तिक १७, २०७७ मा प्रकाशित
काठमाडौं । कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट पछिल्लो २४ घन्टामा २३ जनाको मृत्यु भएको छ । देशका विभिन्न अस्पतालमा पछिल्लो २४ घन्टामा मृत्यु भएका २३ जनासहित देशभर कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या ९ सय ६० पुगेको छ । देशैभर पछिल्लो २४ घन्टामा २ हजार ८ सय २४ जनामा कोरोना संक्रमण भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या..
आइतवार, कार्तिक १६, २०७७ मा प्रकाशित
काठमाडौं । कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट पछिल्लो २४ घन्टामा १७ जनाको मृत्यु भएको छ । योसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या ९ सय ३७ पुगेको छ । देशैभर पछिल्लो २४ घन्टामा २ हजार ५ सय ८ जनामा कोरोना संक्रमण भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो २४..
काठमाडौं। काठमाडौं उपत्यकामा पछिल्लो २४ घण्टामा थप १ हजार ३५७ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौंमा १ हजार ११३, भक्तपुरमा ४९ र ललितपुरमा १९५ जना गरी १ हजार ३५७ जना संक्रमित थपिएका हुन् । यसअघि शुक्रबार (हिजो) काठमाडौंमा उपत्यकामा १ हजार ८८८ जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण..